हाम्रो बारेमा - फुजियान जिनजिiang रुचुन शूज कं, लिमिटेड
फ़ुजियान जिनजि R्ग रुचुन शूज कं, लिमिटेड २०१ 2013 मा स्थापित भएको थियो र फुजियान प्रान्त क्वान्झाउमा अवस्थित रहेको थियो, 96 00 ०० वर्ग मिटरको क्षेत्र ओगटेको छ र 300०० भन्दा बढी कामदारहरू रहेको छ। हामी एक पेशेवर जुत्ता निर्माताहरू मध्ये एक हो जसले पुरुष, महिला र बच्चाहरूको लागि फेसनल डिजाइनको साथ आकस्मिक, खेलकुद जुत्तामा विशेषज्ञता पाउँछौं। हामीसँग उन्नत उत्पादन उपकरण, स्वतन्त्र अनुसंधान तथा विकास क्षमता र मजबूत QC टीम छ। धेरै थोक बिक्रेता, खुद्रा विक्रेता र विश्वव्यापी एजेन्टहरु संग दीर्घकालीन सहयोग छ। हामीले सहयोग गरेका प्रख्यात ब्रान्डहरू हुन्: फाइला, युएस पोलो, पियरे कार्डिन, अस्ट्रेलिया, कप्पा, एरवालक, डुकाटी, चेम्पियन, उमब्रो, इत्यादि। हामीले बनाएका जूताहरू बर्ष १.8 मिलियन जोडी थिए।
हामी OEM अर्डरहरू स्वीकार गर्दछौं र खरीददारको आवश्यकता अनुसार निःशुल्क नमूनाहरू बनाउन सक्दछौं। हाम्रा सबै जुत्ताहरू कडाईका साथ अमेरिका र युरोप मानकको साथ निर्मित छन्। हामीले सँधै उच्च गुणस्तरको जुत्ताहरू प्रदान गर्ने सिद्धान्तलाई पूर्ण गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली अन्तर्गत पूर्ण अनुभवी प्रविधि सहित पूर्ण-अनुभवी टेक्नोलोजीको साथ चयन गरी उच्च गुणवत्ताको जुत्ताहरू प्रदान गर्ने सिद्धान्त अनुसरण गरेका छौं। हामी समानता र आपसी लाभको आधारमा राम्रो गुण, प्रतिस्पर्धी मूल्य, उत्कृष्ट सेवा र शीघ्र वितरणको आश्वासन दिन सक्छौं! हामी नयाँ र पुरानो ग्राहकहरूलाई भविष्यका व्यापार सम्बन्ध र आपसी सफलताको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत गर्दछौं!
गोदाम स्थानान्तरण गर्नुहोस्
ग्राहकको आवश्यकता अनुसार डिजाइन र नि: शुल्क नमूनाहरू बनाउनुहोस्। तपाईं लोगो, रंग, बान्की, सामग्री र आदि निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पेशेवर डिजाइनर र विकास टोलीले तपाईंको विचारहरू आवाज गर्दछ। हामी प्रत्येक महिना नयाँ आइटमहरू विकास गर्दैछौं हाम्रो ग्राहकको लागि हामीले नयाँ तातो बिक्री बिन्दुको प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नका लागि छनौट गर्नका लागि। र तपाईं अवस्थित स्टाइलहरूबाट तपाईंलाई मनपर्ने शैलीहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नमूना नेतृत्व समय लगभग 7-१-15 दिनहरू आसपास छ।
कन्फर्मेसन नमूनाहरू र ग्राहकको अन्य आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्नुहोस्। हामी कच्चा माल मा एक धेरै कडा मानक छ र सबै उत्पादन को समय मा सबै जूता राम्रो गुणवत्ता संग प्याक सुनिश्चित गर्न को लागी production पटक भन्दा बढि निरीक्षण गर्न अगाडि बढ्नेछौं। हामी पनि ग्राहकलाई आवश्यक कारखाना अडिट गर्न ग्राहकलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी छौं र कुन ग्राहकलाई आवश्यक जूता परीक्षण गर्ने। हाम्रो सामान्य उत्पादनको नेतृत्व समय-35-60० दिनहरू हो।
नियोजित फारवर्डर वा हाम्रो सहयोगी फरवार्डरको साथ बुक पात्र निर्धारित समयमा ढुवानी मिति भन्दा २ देखि weeks हप्ता अघि माल ढु ensure्गा निश्चित गर्नको लागि। हाम्रो कारखानामा कन्टेनर भर्नु अघि, हामी कन्टेनर जाँच गर्नेछौं कि यो सफा र सुक्खा छ भनेर। र सावधानीका साथ निर्यात-कार्टनहरू ह्यान्डल गर्नुहोस्। सबै कागजातहरू आपूर्ति गर्नुहोस् जुन ग्राहकलाई ठीकसँग चाहिन्छ र सहज रूपमा घोषणा गर्न।
केहि ब्रान्डहरू हामीले सहयोग गरेका छौं